Shirka Kismaayo maxaa ka soo bixi kara? - BBC News Somali
Image caption Shirka Kismaayo waxaa ka qeybgalaya madaxda shanta dowlad goboleedyada
Wasiirka arrimaha gudaha Jubbaland Maxamed Warsame Darwiish oo BBC-da uga waramay ajandaha shirka uu yahay in "Madmadoow ka dhashay dhanka dowladdii Federaalka ee Soomaaliya lagu turxaan bixiyo, oo laga wada hadlo inta aan gacmo kale iyo cid kale aysan arrinta gaarin, waxaana gogol fidiyay madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam, waana la isugu yimid".
"Shirka shaki badan ayaa laga qabaa, Soomaalida oo dhan waxay u aragtaa armuu shirkan qas keenaa, oo la leeyahay dabkii holcayay armuu baansiin kusii shubaa. Dowladda lafteeda shaki badan ayay ka qabtaa," ayuu yiri Xayle.
Xasan Xayle ayaa dhanka kale rajo ka muujinaya cidda shirka martigalisay "Dabeecadda maamulka Jubbaland, gaar ahaan madaxweynaha Axmed Madoobe. Dadka qaarkood waxay leeyihiin maamul goboleedyada kale wuu ka jecelyahay danaha dalka, mana la keeni doono wax sii kala burburinaya Soomaaliya. Laakiin shakiga wuxuu ka jiraa dhanka maamul goboleedyada qaarkood oo dowladda ku ah lid".
Image caption Qaar ka mid ah waftiga Hirshabeelle oo shirka ka qeybgalaya
Wuxuu dhanka kale dowladda ku eedeeyay in "ciidamada federaalka ee gobollada dhexe u adeegsatay in ay isaga xiraan," balse uu ka badbaaday, sida uu hadalka u dhigay. Dowladda federaalka ayaan arrintaa weli ka hadlin.
Balse xiliga uu shirka kusoo beegmay iyo sida uu yahay dareenka siyaasadeed waxaa cabiraya Xasan Xayle oo yiri: "Waxay u egtahay in dhufeys la isu galay labada dhinac oo la jabhadaynayo, waxaanna aragnaa in abaabulka xoog siyaasadeed uu meesha ka socdo. Dowladda shaki ayay qabtaa, mana la casuumin. Hadduu shirka mid fiicanyahay waxaa dowladda la siin lahaa door ah in ay kor joogto ka noqoto".
Qodobada la'isku hayo waxaa ka mid ah awoodaha uu dastuurka kala siinayo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyad, waxaana xusid mudan in shir weyne ku saabsan dib u eegista dastuurka oo Muqdisho ka furmi lahaa ay diideen in ay ka qeybgalaan dowlad goboleedyada.
Jubbaland oo ka hadashay shirka maamul goboleedyada ee Kismayo